Camaliyad Nafhurnimo oo ka dhacday saldhig ay ku sugnaayeen ciidamada xukuumadda Kaabul. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Camaliyad Nafhurnimo oo ka dhacday saldhig ay ku sugnaayeen ciidamada xukuumadda Kaabul.
On Oct 27, 2018 220 0
Wararka naga soo gaaraya dalka Afqaanistaan ayaa ku waramaya in maanta camaliyad Istish-haadi ah lagu weeraray saldhig aad loo ilaaliyo oo ay ku suganyihiin ciidamo aad u farabadan oo isugu jira milliteriga iyo Police-ka xukuumadda Kaabul.
Gaari uu kaxeynayay Naftii hure katirsan Imaarada oo lagu magacaabo Cuthmaan Qandahaari ayaa beegsaday saldhig ciidan oo ku yaala deegaanka Meydaan shaar oo hoostaga gobolka Meydaan-wardak ee wadanka Afqaanistaan.
Istish-haadiga wuxuu weerarka fuliyay xilli gudaha sladhiga ay galayeen kolonyo ciidamo ah oo ka yimid magaalada Kaabul, waxaana markii uu gaaray afaafka saldhiga uu fuliyay camaliyadda, taas oo keentay in goobta ay ku dhintana tobanaan askari.
War kasoo baxay Imaarada islaamiga ee Afqaanistaan waxaa lagu sheegay in sidoo kale camaliyadda lagu gubay gawaari dagaal oo aad u farabadan, kuwaas oo ka kooban noocyada dagaalka.
Imaarada Islaamiga ee Afqaanistaan waxay intaa ku dartay inaaney jirin dad shacab muslimiin ah oo wax ku noqday howlgalkan, maadama saldhiga uu ahaa mid aad loo ilaaliyo oo aan loo ogoleyn dadka shacabka ah iney kasoo ag dhawaadaan.
Camaliyadan waxay qeyb ka tahay howlgalka Al-khandaq oo gugii lasoo dhaafay Imaaradu kaga dhawaaqday wadanka Afqaanistaan.